Blog Reader: [MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA]2New Entries: MEDIA FIGHTING
[MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA]2New Entries: MEDIA FIGHTING
သတင်းသမားများ နှင့် ၂၀၀၈
Thursday, 15 January 2009 18:38 အေးချမ်းမြေ့
(ဧရာဝတီ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်း ဂျာနယ်လစ်များ အနေနှင့် အာဏာ ပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီး ထောင်ချ ခံရခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက် ခံရခြင်းတို့ ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရသည်နှင့် တပြိုင် နက်တည်း ပြည်ပ (ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ) အခြေစိုက် မီဒီယာများသည်လည်း အင်တာနက် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ကို အပြင်းအထန်ခံခဲ့ရသဖြင့် မြန်မာဂျာနယ်လစ်များအတွက် အခက်အခဲများနှင့် ရောပြွမ်းနေသော နှစ်တနှစ်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနှင့် ၂၀၀၈ မေလဆန်းက ဝင်ရောက်မွှေနှောက်ခဲ့သော နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများကို ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ မြန်မာ မီဒီယာများက အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဆွဲထုတ် တင်ပြနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံတကာက ထူးထူးခြားခြား အာရုံစိုက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
တချိန်တည်းတွင် ပြည်တွင်းရှိ သတင်းသမားများကို အာဏာပိုင်များက တင်းကျပ်စွာစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ဖမ်းဆီးခံရသည့် မီဒီယာသမား ၁၁ ဦးရှိပြီး ၉ ဦးမှာ ထောင်ချခံရသည်။ ကျန် ၁ ဦးကို ချုပ်ရက် ၆ လကျော်ကြာသည့်တိုင် စီရင်ချက် မချသေးပေ။
ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ပြည်တွင်း၌ ဂျာနယ်လစ်များ အသတ်ခံရသည်ဟူသော သတင်းမျိုးတော့ မကြားရပါ။ အီရတ်၊ ဆိုမာလီနှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ရှိ သတင်းထောက်များထက် စာလျှင် တော်သေးသည်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းရှိ သတင်းသမားများအတွက် အကြီးမားဆုံးသော အခက်အခဲမှာ စာပေစိစစ်ရေးနှင့် အပတ်စဉ် ရင်ဆိုင်နေရ ခြင်းဖြစ်သည်။ စာပေစိစစ်ရေးနှင့် ရင်ဆိုင်ရာတွင် ပုံစံမတူ မူကွဲများနှင့် ကြုံတွေ့ ကြရသည်။ ဥပမာ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဓာတ်ပုံကို တနင်္လာ၊ အင်္ဂါတွင်ဖြန့်ချိသည့် ဂျာနယ်တချို့တွင် ခွင့်ပြု ခဲ့ပြီးမှ နောက်ပိုင်းရက်ထွက်မည့် ဂျာနယ်များတွင် ထည့်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ဖူးကြောင်း ရန်ကုန် အခြေစိုက် သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာတဦးက ပြောပြသည်။
စိစစ်ရေး၏ မူဝါဒကို လိုက်နာခြင်းမရှိဟုဆိုကာ ဂျာနယ်အပိတ်ခံရခြင်း၊ ဂျာနယ်တိုက်ဝန်ထမ်းများကို ဖိအားပေး နုတ်ထွက်ခိုင်းခြင်းများ ရှိသည်။ ၂၀၀၈ နှစ်ဆန်းပိုင်းကာလက မြန်မာတိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဂြိုဟ်တု စလောင်း သတင်းကြောင့် အယ်ဒီတာများဖြစ်သော မနွယ်နွယ်အေး ဦးမြင့်စိုး၊ ကိုဝင်းညွန့်လွင် နှင့် သတင်း ထောက်ချုပ် ကိုဝင်းကျော်ဦးတို့ကို ဖိအားပေး နုတ်ထွက် ခိုင်းခဲ့သည်။ ချယ်ရီမဂ္ဂဇင်းမှ အယ်ဒီတာ တဦးလည်း အလားတူ နုတ်ထွက်ပေးခဲ့ရသည်။
သစ္စာ (True News) အပတ်စဉ် ဂျာနယ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံဖူးခက်နယ်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တခုမှ မြန်မာကလေး အလုပ်သမားဓာတ်ပုံကို ဖော်ပြခဲ့သောကြောင့် ထုတ်ဝေခွင့် ၁ လ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပြီး အက်ရှင်တိုင်းမ်စ် ဂျာနယ်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်သတင်းကို အသေးစိတ် ဖော်ပြခဲ့သောကြောင့် ၂ လ ပိတ်ခံခဲ့ရသည်။ ပိတောက်ပွင့်သစ် မဂ္ဂဇင်းသည်လည်း အိုးဝေဦးညိုမြနှင့်ပတ်သက်၍ မျက်နှာဖုံးသတင်း ဆောင်းပါး ရေးသားခဲ့သောကြောင့် ထုတ်ဝေခွင့် ယာယီ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသည်။
"စိစစ်ရေးက ဖြတ်ဖို့မေ့သွားပြီး ဂျာနယ်ထွက်လာတော့မှ ဆိုင်ပေါ်ကနေ ပြန်သိမ်းပါ ဆိုတာမျိုးတွေလည်း ကြုံဖူးတယ်" ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် သတင်းအယ်ဒီတာတဦးက ဆိုသည်။
အပတ်စဉ် စာစစ်မှူးများကို ဂျာနယ်မူကြမ်းတင်ပြသည့် နေ့တွင် ငွေပေးရသည်၊ အရာရှိအားလုံးအတွက် အချိုရည် နှင့် မုန့်များ ဝယ်ပေးရသည်၊ ညွှန်မှူးနှင့်တကွ အကြီးတန်းအရာရှိများကို တလတခါ ပဲဆီပုံး ဝယ်ပေးခြင်း၊ တနှစ် တခါ လက်ဆောင်ခြင်းများပေးပို့ခြင်း ပြုလုပ်ရသည်၊ ထိုသို့ပေးရန်ပျက်ကွက်ပါက ငြိုငြင်ပြောဆိုခံရသည်၊ ပညာပြ တတ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။ နှစ်စဉ် စာပေစိစစ်ရေး၏ ကထိန်ပွဲ၊ သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက် အပျော်ခရီး တို့အတွက် ဂျာနယ်တိုက်များက ရန်ပုံ ငွေ ထည့်ဝင်ပေးရသေးသည်။ စိစစ်ရေး ညွန်ကြားရေးမှူး ခရီးထွက်နေချိန် မျိုးတွင် ကျန်ရှိနေသူ မည်သူတဦး တယောက်ကမှ တာဝန်မခံရဲဘဲ ပိုမိုစိစစ် ဖြတ်တောက်ခြင်းများ ကြုံတွေ့ ကြရကြောင်း ကြားသိရသည်။
"ပြည်တွင်းက သတင်းအယ်ဒီတာတွေအားလုံး စိစစ်ရေးမှူးတွေရဲ့ အဟိန်းအဟောက် မခံရဘူးသူ မရှိဘူး။ မတော်တဆ မှားသွားတာပါလို့ ခံဝန်လက်မှတ်မထိုးဖူးတဲ့သူလည်း မရှိဘူး" ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်ထဲတွင် အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာရုံးများမှ သတင်းရယူရန် ပိုမိုခက်ခဲလာသည်၊ အစိုးရ ဌာနများက သတင်းသမားများနှင့် ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်ခြင်း မပြုသလောက် ဖြစ်လာသည်၊ သတင်း ထုတ်ပြန်ရန် ငြင်းဆိုလာကြသည်။ ထို့ပြင် သတင်းမှန်ပါလျှက် သူတို့မပြောဘဲ ရေးပါသည်ဟုဆိုကာ တရားစွဲမည် ဟု ခြိမ်းခြောက်ခံကြရသည်။
ဌာနဆိုင်ရာသတင်းများတွင် ပြောသူအမည်နှင့် ရာထူးကို ထည့်သွင်းရမည်ဟု စိစစ်ရေးက ညွှန်ကြားသည်နှင့် တပြိုင်နက်တည်း ဌာနဆိုင်ရာများကလည်း ထည့်သွင်းပေးရန် ကြောက်ရွံ့သဖြင့် သတင်းများစွာ ဖော်ပြ ရေးသားခွင့် ဆုံးရှုံးရသည်။ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် သတင်းထောက်များစွာ ရှိသည်။
နှစ်ဆန်းပိုင်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အင်းလျားလမ်း ၅ လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဈာပန အခမ်းအနား ဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့သော ဆဲဗင်းဒေးနယူးစ် ဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာ မငြိမ်းငြိမ်းနိုင် တရားစွဲဆို ခံခဲ့ရသည်။
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း လွတ်လပ်စွာသွားလာ သတင်းယူခွင့်မရှိပေ။ မှုခင်းသတင်းများကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း အစိုးရသတ်မှတ်ပေးထားသည့် နေရာများတွင်သာ ၎င်းတို့ ရှင်းလင်း ပြသည့်အတိုင်း ရယူပြီး ရေးကြရသည်။ မိမိ လိုက်လိုသည့် ဒေသခံ ရဲစခန်းများတွင် သတင်းယူခွင့် လုံးဝ မရှိတော့ပေ။
၂၀၀၈ ခုနှစ်ထဲတွင် ပြည်တွင်းသတင်းသမားများကို ခေါ်ယူ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်းများ ပိုမိုများပြား လာသည်။ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း နောက်ပိုင်း လူမှုကူညီရေး လုပ်ငန်း များတွင် ပါဝင်သောကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရသူများ ရှိသည်။ နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဖမ်းအဆီးခံရသည့် သတင်းသမား ၄ ဦးရှိသည်။ ၃ ဦးမှာ ဒုက္ခသည်များကို သွားရောက်လှူဒါန်းရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော အဖမ်းခံရခြင်းဖြစ်ပြီး ၁ ဦးမှာ ဆိုင်ကလုန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မသယ်ဆောင်သွားမီ အဖမ်းခံရ ခြင်းဖြစ်သည်။
မတရား အမှုဆင်၍ ဖမ်းဆီးခံရသူများလည်း ရှိသည်။ ထို့ပြင် ပြောမှားဆိုမှားဖြစ်၍ တရားစွဲဆိုထောင်ချ ခံရသူများလည်း ရှိသည်။ အချုပ်ထဲတွင် ၂ လကျော် နေခဲ့ရသည့် ဖလားဝါးနယူးစ် ဂျာနယ် သတင်းထောက် ကိုစောမြင့်သန်းကို ဥပမာပေးကာ သတင်း သမားများ ခေါင်းမထောင်ရဲအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကိုစောမြင့်သန်းသည် သင်္ဃန်းကျွန်းလူသတ်မှုသတင်းကို ရေးသားခဲ့ရာ မြို့နယ်ရဲစခန်းတခုမှ ခေါ်ယူခြိမ်းခြောက် ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ခြိမ်းခြောက်သည့် သတင်းကို ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားခဲ့သဖြင့် ကိုစောမြင့်သန်းကို ဖမ်းဆီး သွားခဲ့သည်။
ကဗျာဆရာစောဝေသည်လည်း အချစ်ဂျာနယ်တွင် "အာ နာ ရူး ကြီး မှူး ကြီး သန်း ရွှေ" ဟူသည့် စကားလုံးများ ပါဝင်သည့် ကဗျာ ရေးသားခဲ့သဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရသည်။
ထို့ပြင် ယခုလအတွင်း လွတ်လပ်သော အာရှအသံ (အာအက်ဖ်အေ) ၏ ထုတ်လွှင့်ချက် တခုတွင် ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) သတင်းဌာန၏ ပြည်တွင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ၉ ဦး အဖမ်းခံထားရကြောင်း ၎င်း ရုပ်သံသတင်း ထောက် ကိုကျော်မင်းသက်က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်ဟု ပါရှိသည်။ ဖမ်းရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ စစ်အစိုးရ၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို နိုင်ငံတကာကသိရှိစေရန် ဖော်ထုတ်သောကြောင့်ဟု သိရသည်။
ချင်းမိုင်အခြေစိုက် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း၏ မန်နေးဂျင်းအယ်ဒီတာ ကိုကျော်စွာမိုးကလည်း "စစ်အစိုးရကတော့ ဂျာနယ်လစ်တွေရဲ့ ရန်သူဖြစ်နေတုန်းပဲ" ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းက စစ်အစိုးရ ဆက်အုပ်ချုပ်နေသရွေ့ မီဒီယာလောက အခြေအနေမှာ အပြောင်းအလဲ ရှိရန် မမြင်ဟု ဆက်ပြောသည်။
စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းမှုသည်လည်း ပြည်တွင်း သတင်းသမားများအတွက် အရေးပါလှသည့် အခက်အခဲ တခုဖြစ်သည်။ အလုပ်သင် သတင်းထောက်တယောက်၏ လစာမှာ ကျပ် ၃၀၀၀၀ ခန့်သာရှိပြီး ၎င်း၏ အရည် အသွေးပေါ်မူတည်၍ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်သွားရာ အမြင့်ဆုံးမှာ ကျပ် ၇၀၀၀၀ ခန့်သာ ရှိသည်။ ရန်ကုန် လူနေမှုစရိတ်အရ တဦးချင်း အသုံးစရိတ်မှာ နေ့စဉ် ကျပ် ၁၅၀၀ ခန့်ရှိသောကြောင့် မလောက်ငပေ။
အမြင့်ဆုံးအယ်ဒီတာတဦးပင် လစာ ကျပ် ၃၀၀၀၀၀ ခန့်သာ ရရှိသဖြင့် အိမ်ထောင်ရှိသူဆိုလျှင် ငွေကြေး မလောက်ငသည့် ပြဿနာ ရင်ဆိုင်ရသည်။ ရန်ကုန်တွင် အိမ်ငှားခ၊ တိုက်ခန်းငှားခ ဈေးမှာ အဆမတန် မြင့်မားသည်။ အိမ်ငှားခ သက်သာသည့် မြို့ပြင်ဒေသများမှ လာရလျှင် ခရီးစရိတ်နှင့် အချိန်ကုန်သောကြောင့် မထူးလှပေ။
သတင်းထောက်အားလုံး နီးပါးတွင် ကိုယ်ပိုင် အသံဖမ်းစက်နှင့် ကင်မရာမရှိကြ။ ရုံးမှ ထုတ်ပေးသော ထိုပစ္စည်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးလျှင် ကိုယ်ပိုင်ငွေထဲမှ စိုက်လျှော်ရသည်။
[မြန်မာပြည်တွင်းရှိ စာနယ်ဇင်းသမားများအဖို့ ဟန်းဖုန်းနှင့် ခရီးဆောင်ကွန်ပျူတာ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဆိုသည်မှာ အိပ်မက်တခုအလားပင် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)]
"ရန်ကုန်က သတင်းထောက်တွေအတွက် ဟန်းဖုန်းတို့ လက်ပ်တော့ပ်တို့ ပိုင်ဖို့ဆိုတာ အိပ်မက်တခုပါပဲ" ဟု သတင်း အယ်ဒီတာတဦးက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ပြောကြားသည်။
ပြည်တွင်းရှိ ဂျာနယ်နှင့် မဂ္ဂဇင်း အစောင် ၃၀ ထက်မနည်း နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးခ မတတ်နိုင်တော့သော ကြောင့် ၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ထုတ်ဝေခွင့်လိုင်စင်များ ရုတ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
ပြည်ပမီဒီယာများ၏ အခက်အခဲများသည်လည်း သေးငယ်လှသည်ဟု မဆိုသာပေ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာမီဒီယာများ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာများကို အကြီးအကျယ် အတိုက်အခိုက် ခံခဲ့ရသည်။ တိုက်ခိုက်ခံရသည့် မီဒီယာများထဲတွင် ဧရာဝတီ၊ မဇ္ဇျိမ၊ ခေတ်ပြိုင် နှင့် DVB ဝက်ဘ်ဆိုက်များ ပါဝင်သည်။
၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်များထဲမှ ၃ ခုမှာ DDoS (Distributed denial- of- service) နည်းပညာဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှု မကြုံတွေ့ရစေရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်း ကြရသည်။
"ကျနော်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဆိုရင် ၂၀၀၈ ထဲမှာကို တိုက်ခိုက်ခံရတာ ၃၊ ၄ ကြိမ်လောက်ရှိမယ်။ သေချာကို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့၊ အုပ်စုလိုက်နှောင့်ယှက်နေတယ် ဆိုတာ သိရတယ်" ဟု မဇ္ဇျိမ သတင်းဌာနမှ လက်ထောက် အယ်ဒီတာ ကိုမုံပီးက ပြောပြသည်။
ထို့ပြင် နအဖ ဘက်တော်သားများ၏ သတင်းလွှဲမှု၊ သတင်းမှားများ ပေးမှုကိုလည်း မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
"သတင်းတွေကို အမှား၊ အမှန် သေချာ အတည်မပြုနိုင်လို့ လက်လွှတ်လိုက်ရတာတွေ အများကြီးပဲ" ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
ပြည်ပရှိ အတိုက်အခံ မီဒီယာများတွင် ပြည်တွင်းမီဒီယာများကဲ့သို့ စာပေစိစစ်ရေးကို တင်ပြစရာမလိုသော်လည်း မိမိစာကို မိမိသေချာစွာ စိစစ် တည်းဖြတ်နေရသည့် ပြဿနာ ရှိသည်။ ကိုယ်တိုင်စိစစ် ဖြတ်တောက်ခြင်း မလုပ်မိပါက ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်းများ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။
ပြည်တွင်းမှ သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အရုပ်များ၊ အသံများ၊ နာမည်များ ပေးမသုံးခြင်းသည်လည်း အခက်အခဲ တခုဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်အခြေစိုက် DVB ရုပ်သံမှ အယ်ဒီတာ ဦးခင်မောင်စိုးကပြောသည်။
"အဲဒါက အဆိုးဆုံးပေါ့ဗျာ။ တချို့ DVB ကမို့ မပေးဘူး ဆိုတာမျိုး ခဏ ခဏ ကြုံရတယ်ဗျ" ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ဝါရှင်တန်ဒီစီ အခြေစိုက် VOA ရေဒီယိုအစီစဉ်၏ မြန်မာပိုင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းကလည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်းတွင် ၎င်းတို့မီဒီယာအနေနှင့် သတင်းလိုက်ရခက်ခဲသည့် ပြဿနာနှင့် အကြီးအကျယ် ကြုံတွေ့ ရသည်ဟု ပြောပြသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းဝင်မွှေသွားပြီး နောက်ပိုင်း VOA ရေဒီယိုအစီအစဉ်က သတင်းများရယူလွှင့်ထုတ်နိုင်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း နအဖစစ်အစိုးရက ဆက်သွယ်ရေးများ ဖြတ်တောက်လိုက်သဖြင့် အခက်အခဲတွေ့ရသည်ဟု ၎င်းကဆက်ပြောပြသည်။
စစ်အစိုးရအနေနှင့် ပြည်တွင်း၌ ဖြစ်ပျက်နေသည့် အခြေအနေမှန်များကို နိုင်ငံတကာအား မသိစေလိုခြင်းက အဓိက ပြဿနာတခု ဖြစ်နေကြောင်း သူကထောက်ပြသည်။ ထိုသို့ ပိတ်ဆို့ခံရမှုကြောင့် သတင်းသမားတို့ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ကာ သတင်းရင်းမြစ်များ မဖော်ပြနိုင်သည့် အနေအထား ရှိခဲ့သည်ဟု ဦးသန်းလွင်ထွန်းက ဆိုသည်။
ပြည်တွင်း၌ သတင်းစာပညာနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာ သင်ယူစရာ သင်တန်းများ၊ ကျောင်းများ သေသေချာချာ မရှိခြင်းသည်လည်း သတင်းလောကသို့ စမ်းတဝါးဝါး ဝင်ရောက်လာသည့် လက်သင် သတင်းထောက်များ အတွက် အခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။
ယခုနောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာပြည်တွင်း၌ သတင်းထောက်အလုပ်ဆိုသည်မှာ တခြားသော အရောင်းဝန်ထမ်း၊ ကြော်ငြာဈေးကွက် ရှာဖွေသူ၊ ကုမ္ပဏီ စာရေး စသူတို့ကဲ့သို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတရပ်ဖြစ်နေရာ တက္ကသိုလ် ၄ နှစ်တက်ပြီး မည်သည့်အလုပ် လုပ်ရမည် မသေချာသေးခင် အလုပ်တခု ရရာဝင်လျှောက်သည့် သဘောဖြင့် ဝင်လာကြသူ များပြားကြောင်း ပြည်တွင်း မီဒီယာတခုမှ အကြီးတန်း အယ်ဒီတာတဦးကပြောသည်။
ပြည်ပ မီဒီယာများတွင်မူ လူသားရင်းမြစ် ရှားပါးသောကြောင့် ရွေးချယ်စရာ အခွင့်အလမ်း အလွန်နည်းပါးသည်။ ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာများသည် ပြည်ပသို့ ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သော နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများကို နီးစပ်ရာဆွဲခန့်ပြီး မီဒီယာပညာရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ လက်ပူတိုက်သင်ကြားပေးကြရသည်။
ပြည်ပ မီဒီယာတိုင်းအတွက် ပြည်တွင်းတွင်အခြေစိုက် လုပ်ကိုင်သတင်းပေးပို့နေသည့် သတင်းထောက်များ ရှိသော်လည်း ထိုသူတို့၏ အန္တရာယ်မှာ ကြီးမားလှသည်။
"အခုက ပြည်တွင်းမှာ ကင်မရာကိုင်တဲ့သူဆိုရင်ကို စိတ်မချရတော့ဘူး။ နောက်က တကောက်ကောက် လိုက်စောင့် ကြည့်နေတာ" ဟု DVB ၏ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးအေးချမ်းနိုင်က ပြောပြသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက အာဏာပိုင်များအနေနှင့် ပြည်တွင်းမှ သတင်းများ ပြည်ပသို့မရောက်ရှိနိုင်ရန် နည်းမျိုးစုံနှင့် တားဆီးပိတ်ပင်သော်လည်း မီဒီယာများက ကမ္ဘာကသိအောင် လုပ်ပေးနိုင်နေဆဲဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မဇ္ဇျိမ သတင်းဌာန၏ လက်ထောက်အယ်ဒီတာ ကိုမုံပီးကလည်း "ပြည်တွင်းက ကျနော်တို့သတင်းထောက်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးက အရမ်းကိုအရေးကြီးလာတယ်။ သူတို့က လုံခြုံရေးကိုငဲ့နေရတော့ စိတ်ရှိလက်ရှိ သတင်း မလိုက်နိုင် ကြဘူးပေါ့" ဟု ပြောပြသည်။
ပြည်ပမီဒီယာများတွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် သတင်းသမားအားလုံးလိုလို ကြုံတွေ့ရသည့် ပြဿနာတခုမှာ နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာဖြစ်သည်။ အများစုမှာ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် တခြား နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်များ တရားဝင်ကိုင်ဆောင်ထားကြသော်လည်း ၎င်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ရှင်သန်နေရန် ၃ လတခါ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ထွက်ခွာပြနေရသည်။
တရားဝင် ပတ်စ်ပို့ မကိုင်ဆောင်ထား သူတို့မှာမူ ခရီးတိုထွက်ရန်ပင် ခက်ခဲပြီး နေ့စဉ် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအာဏာပိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးမှုရန်မှ ကင်းဝေးရန် ရှောင်တိမ်းနေကြရသည်။ တချို့မှာ တတိယနိုင်ငံသို့ထွက်ပြီး တရားဝင် နေထိုင်ခွင့်ရရန် ကြိုးပမ်းကြရသော ကြောင့် အနည်းဆုံး သုံး၊ လေး၊ ငါး နှစ်ခန့် မိမိမီဒီယာကို စွန့်ခွာကြရသည်။
ငွေကြေးမရေရာမှုသည်လည်း ပြည်ပမီဒီယာများကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲထဲတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းမီဒီယာများ အားလုံးမှာ စီးပွားဖြစ် မဟုတ်သော မီဒီယာများဖြစ်နေပြီး ထောက်ပံ့ငွေကြေး (Funding) ချပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများပေါ်တွင်သာ တည်မှီ လုပ်ကိုင်နေကြရသဖြင့် နှစ်စဉ် ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့် မီဒီယာများရှိသည်။ ယခု ကာလကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကပ်ဆိုက်ချိန်တွင် ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ရပ်တည်နေရသော မီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများ မျက်ခုံးလှုပ်ရသည့် ကာလဖြစ်သည်။
"ပိုက်ဆံကတော့ ကျနော်တို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတရပ်ပေ့ါဗျာ။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထဲမှာ လုံးဝ ရပ်သွားရ လောက်အောင်ထိတော့ မကြုံခဲ့ရပါဘူး" ဟု ကိုမုံပီးက ပြောပြသည်။
ဆက်လက်၍ သူက မဇ္ဇျိမ သတင်းဌာနသည် ငွေကြေးကို အလှူရှင်များပေါ်တွင် အမှီပြုနေရသော်လည်း မဇ္ဇျိမ၏ အယ်ဒီတာ့ အာဘော် အပေါ်သို့ အလှူရှင်များလွှမ်းမိုးသည်ကိုမူ လက်မခံကြောင်း ပြောသည်။
"သူတို့ဘက်က သတင်းဦးသတင်းထူး မို့လို့ ပြောပြတာမျိုးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဇ္ဇျိရဲ့ အယ်ဒီတိုရီရယ် ပေါ်လစီက လွတ်လပ်မှုရှိရမယ် ဆိုတာ အစောကြီးကတည်းက ကြေညာထားတယ်။ အလှူရှင် တွေအနေနဲ့ စွက်ဖက်တာမျိုးမရှိပါဘူး" ဟု သူက ဆိုသည်။
ပြည်ပအခြေစိုက် တိုင်းရင်းသား မီဒီယာများအနေနှင့်လည်း အခက်အခဲများစွာ ရှိနေသည်။ မွန်တိုင်းရင်းသား သတင်းဌာန တခုဖြစ်သော လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ၏ အယ်ဒီတာချုပ် နိုင်ကဆော့မွန်က ၎င်းတို့အတွက် အကြီးမားဆုံး အခက်အခဲမှာ သတင်းထောက်များကို ငွေကြေးလုံလောက်စွာ မထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
"ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား မီဒီယာအဖွဲ့တွေက တိုးတက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကွက်ရဖို့ တော်တော် လေးကို ခက်ခဲတယ်" ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။ ၎င်းတို့ဆက်လက် ရပ်တည်ရေးမှာ အလှူရှင်များ အပေါ်တွင် များစွာ မူတည်လျှက်ရှိကြောင်း ပြောပြသည်။
၎င်းတို့အတွက် နောက်ထပ် အခက်အခဲတခုမှာ သတင်းထောက်များအတွက် လုံခြုံရေး ပြဿနာဖြစ်သည်။ မွန် တိုင်းရင်းသား သတင်းထောက် အများစုမှာ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် နေထိုင်လှုပ်ရှားနေရပြီး ထို သတင်း ထောက်များကို စစ်အစိုးရနှင့် လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလဲလှယ်ထားသည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီသာမက မြန်မာ စစ်တပ်ကပါ သိရှိနေသဖြင့် စွန့်စားသတင်းရယူနေရကြောင်း နိုင်ကဆော့မွန်က ဆိုသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် မြန်မာစစ်တပ်ကို ဝေဖန်ရေးသားသည့် တချို့သော ၎င်း၏ သတင်းထောက်များကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီဝင်တချို့က လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများပင် ရှိသည်ဟု ဆက်ပြောသည်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသား သတင်းဌာန တခုဖြစ်သော သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်း ဌာနကမူ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ငွေကြေးပြတ်တောက်မှု ပြဿနာအပြင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာကိုပါ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ၎င်းသတင်းဌာန၏ အယ်ဒီတာ တဦးဖြစ်သူ ဦးခွန်စိုင်းဂျန်ရေက ပြောသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလအတွင်းက ၎င်းတို့ သတင်းဌာနအနေနှင့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများ၊ အခြေခံဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများကို ဆက်သွယ်ရေး ပြဿနာကြောင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြရန် ခက်ခဲခဲ့သည်ဟု သူက ဆိုသည်။
အလားတူ ကရင်တိုင်းရင်းသား သတင်းဌာနဖြစ်သည့် ကရင်သတင်းဌာန (ကေအိုင်စီ) သည်လည်း ငွေကြေး အခက်အခဲနှင့် လူသား အရင်းအမြစ် ရှားပါးမှု ပြဿနာကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ၎င်းအဖွဲ့၏ အယ်ဒီတာ နန်းဖောဂေက ပြောပြသည်။
ကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီး အတွေ့အကြုံရှိသည့် တိုင်းရင်းသား သတင်းထောက်များသည် မိခင် သတင်းအေဂျင်စီများကို စွန့်ခွာကာ လစာကောင်းစွာ ပေးနိုင်သည့် နာမည်ကြီး သတင်းဌာနကြီးများသို့ သွားရောက်အမှုထမ်းကြသဖြင့် လူသားအရင်းအမြစ် ရှားပါးမှု ပြဿနာကို ကြုံတွေ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နန်းဖောဂေးက ရှင်းပြသည်။
ကရင်တိုင်းရင်းသား သတင်းသမားကောင်းများစွာ ရှိနေသော်လည်း ထိုသူတို့ကို လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ပေး နိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့၏ သတင်းဌာနကို အခက်အခဲများစွာဖြင့် ဆက်လက် ရုန်းကန်နေရသည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်ပရောက် တိုင်းရင်းသား မီဒီယာများအားလုံးက လူသားအရင်းအမြစ် ရှားပါးမှု ကို ကြီးမားသည့် အခက်အခဲအဖြစ် သဘောတူညီကြပြီး ငွေကြေး မလုံလောက်မှုမှာ ၎င်းတို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတရပ် ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြသည်။
ယခုအခါတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ ဘလော့ဂါများသည်လည်း မီဒီယာတာဝန်ကို တစိတ်တပိုင်း ထမ်းဆောင် သူများ ဖြစ်နေပေပြီ။ ပြည်တွင်းရှိ ဘလော့ဂါများ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲမှာ အင်တာနက် လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲခွင့် မရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
[ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်းကို နေပြည်တော်ရှိ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တခုတွင် စာနယ်ဇင်း သမားများနှင့်အတူ တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - AFP)]
အာဏာပိုင်များက အင်တာနက် သုံးစွဲခွင့်ကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပိတ်ဆို့မှုများ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြုလုပ်လျှက်ရှိရာ ပြည်တွင်းမှ ဘလော့ရေးနေသူများ ဒုက္ခရောက်ကြရသည်။
"၂၀၀၈ နှစ်ကုန်ခါနီးလောက်မှာ ကိုယ့်ဘလော့ကိုတောင် ဝင်ကြည့်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။ စိတ်ပျက်ရတယ်" ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဘလော့ဂါတဦးက ပြောပြသည်။
ပြည်တွင်းရှိ ဘလော့ဂါများမှာ အာဏာပိုင်များ၏ အာရုံစိုက်မှုမှ ကင်းလွတ်အောင် ရှောင်ရှားရသည့် ပြဿနာ လည်းရှိသေးသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က အဖမ်းအဆီးခံခဲ့ရသော ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်က ဥပမာတခုဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂါနေဘုန်းလတ်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချမှတ်ခဲ့သည်။
ပြည်ပတွင် အခြေစိုက်နေရသည့် မီဒီယာသမားများအနေနှင့် ငွေကြေးအခက်အခဲနှင့် အယ်ဒီတိုရီရယ် ပေါ်လစီ အရပါ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရပ်တည်ရန် ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ကိုကျော်စွာမိုးက ပြောသည်။
"ကျနော်တို့ ဂျာနယ်လစ်တွေကိုယ်တိုင်ကိုကပဲ စာနယ်ဇင်းရဲ့ ရန်သူဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ စာနယ်ဇင်းသမား ပီပီသသနဲ့ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ဝတ္တရားရယ် သူတို့ရဲ့ တာဝန်အရ ပြည်သူကို အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ရယ် အဲဒီ ၂ ချက်ကို ယုံယုံကြည်ကြည် စွဲစွဲမြဲမြဲ ကိုင်မထားနိုင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲ ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူ ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်" ဟု သူက ဆိုသည်။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ မီဒီယာများအားလုံးမှာ အခက်အခဲ အနည်းနှင့်အများ ဆိုသလို ကြုံတွေ့နေရသော်လည်း သတင်းများကို ပြည်သူလူထုလက်ဝယ် ရောက်ရှိရေးအတွက် ကြိုးစားနေကြသူများချည်းသာ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အထီးကျန်ဝါဒ ကိုင်စွဲထားမှုကြောင့် မြန်မာပြည်သူလူထုအနေနှင့် လွတ်လပ်သည့် သတင်းမီဒီယာများကို ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်သည်။
"ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်ရမှာပဲ။ နအဖအနေနဲ့ ဘယ်လိုပဲတားဆီး တားဆီး သတင်း စီးဆင်းမှုတွေကို သူတို့ မပိတ်ဆို့နိုင်ပါဘူး။ ခုလို နည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ပိုလို့တောင် မတားဆီးနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်" ဟု ဦးအေးချမ်းနိုင်ကပြောသည်။
ပြည်တွင်း၌ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရှိခြင်းက စစ်အစိုးရ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုများကို ဖုံးကွယ်ပေး နေယုံမျှမက ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် အန်ဂျီအိုများ၊ အတိုက်အခံများ၏ အဂတိလိုက်စားမှု စသော ချိုးဖောက်နေမှုများကိုပါ ပြည်သူလူထု မမြင်သာအောင် ဖုံးပေးနေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။
"မီဒီယာဆိုတာ ပြည်သူလူထုအတွက် မျက်စိနဲ့ နားတွေပဲ။ အဲဒီလိုပဲ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ အတွက်လည်း မျက်စိနဲ့ နားတွေ ဖြစ်သင့်တယ်။ စစ်အစိုးရက မီဒီယာကို ရန်သူလို သဘောထားနေသရွေ့တော့ ပြည်တွင်းမှာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတာ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး" ဟု VOA မြန်မာပိုင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းက ဆိုသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း အထိမ်းသိမ်းခံခဲ့ရသည့် သတင်းသမားများ
ဦးသက်ဇင်၊ ၄၂ နှစ်
အယ်ဒီတာ (မြန်မာနေးရှင်း အပတ်စဉ်ဂျာနယ်)
ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် (ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်)
သင်္ဃန်းကျွန်း တရားရုံးတွင်အမှုစစ်သည်။ အာဏာပိုင်များက ၎င်း၏ ဂျာနယ် ရုံးခန်းကို ဝင်ရောက် ရှာဖွေခဲ့ရာ ၂၀၀၇၊ စက်တင်ဘာ အရေးတော်ပုံလှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံများ ပါဝင်သည့် စီဒီအချပ်များ တွေ့ရှိသောကြောင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ် (ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်)
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း ဒုက္ခသည်များကို သွားရောက်လှူဒါန်းရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
မန်နေဂျာ (မြန်မာနေးရှင်း အပတ်စဉ်ဂျာနယ်)
ဦးသက်ဇင်နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံရကာ ထောင်ချခံရခြင်းဖြစ်သည်။
ထောက်ဒဏ် ၁၈ နှစ် (ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်)
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း နှင့်ပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်း ဗီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံများကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ယူဆောင်သွားစဉ် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်၌ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
မအိမ့်ခိုင်ဦး၊ ၂၄ နှစ်
သတင်းထောက် (အီကိုဗစ်ရှင်း အပတ်စဉ်ဂျာနယ်)
ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် (ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်)
သတင်းထောက် (News Watch ဂျာနယ်)
ထောင်ဒဏ် ၃ လ (ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်)
၎င်း ဂျာနယ်တွင် တရားသူကြီးလာဘ်စားသည့် သတင်းရေးမှုဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့တွင်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
အယ်ဒီတာ (စောင့်ကြည့် ဂျာနယ်)
ကိုထွန်းထွန်းသိန်းရေးသည့် တရားသူကြီး လာဘ်စားမှုသတင်းကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြသောကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
ဦးအောင်သွင် (ခ) ဦးအောင်ကြီး
(အဖမ်းခံရသည့် အကြောင်းရင်း မသိရှိရ)
အားကစား စာရေးဆရာ။ First Eleven ဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာဟောင်း
ထောင်ဒဏ် ၁၉ နှစ် (ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်)
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းဒုက္ခသည်များကို ကိုဇာဂနာနှင့်အတူ သွားရောက်လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
အယ်ဒီတာချုပ် (မြန်မာထရီဗြွန်း အပတ်စဉ်ဂျာနယ်)
ချုပ်ရက် ၆ လကျော်ကြာသည်ထိ အမိန့်မချသေး
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းကြောင့် သေဆုံးသွားသည့် လူသေအလောင်းများကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မြှုပ်နှံပေးခဲ့ပြီးနောက် အဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
သင့်...ဗဟုသုတ မည်မျှ ရှိပါသနည်း
- ယမထာ -
အောက်ပါမေးခွန်းများကို မှန်လျှင် (မှန်)၊ မှားလျှင် (မှား) သင့်အတွေ့အကြုံ၊ အသိစိတ်ဖြင့် ဖြေဆိုပါရန်
၁။ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ခြင်းသည် သာသနာကို ညှိုးနွမ်းစေ၏ ။ (မှန်/ မှား)
(ဥပမာ- မြတ်စွာဘုရားသည် တရားအားထုတ်ရန် မဟာဝုန်တောသို့ ၀င်ရောက်သွားကြသော ရဟန်းတော် (၅၀၀)အား ဘီလူးကြမ်းများ၊ သရဲများရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ တရားအားထုတ်နိုင်ရန် မေတ္တာသုတ်ကို ဟောကြားခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓသည် သာသနာကို ညှိုးနွမ်းစေသူလော။)
၂။ `လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ´ မေတ္တာပို့ခြင်းသည် တိုင်းပြည်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို နှောက်ယှက်သည်။ (မှန်/ မှား)
(ဥပမာ- ရေကိစ္စဖြင့် သတ်ဖြတ်ကြတော့မည့် ကောလိယနှင့် သာကိယ နှစ်ပြည်ထောင် ခိုက်ရန်မဖြစ်ကြရန် ဗုဒ္ဓသည် မဟာသမယသုတ်ဖြင့် လူအချင်းချင်း မနှိပ်စက်ရန် ဟောပြဆုံးမခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရ၏။ ဗုဒ္ဓသည် တိုင်းပြည်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို နှောက်ယှက်သူလော။)
၃။ ဆွမ်းလောင်းသင်း တည်ထောင်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရကို အကြည်ညိုပျက်စေသည်။ (မှန်/ မှား)
(ဥပမာ- ဘာသာခြားအင်္ဂလိပ်မင်းများ အုပ်စိုးစဉ်က ဘာသာ၊ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ချီးမြှောက်မှု နည်းပါးခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးများ ကိုယ့်ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် အသင်း၊ အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ တပိုင်တနိုင် စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြ၏။ ထိုအဖွဲ့အစည်းတို့မှ ဗုဒ္ဓကလျာဏယုဝအသင်းကြီးသည် ယခုတိုင် ထင်ရှား၏။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလျာဏယုဝအသင်းကြီးသည် အစိုးရ အကြည်ညိုပျက်စေသော အသင်းကြီးလော။)
၄။ ကြံ့ခိုင်ရေး အသင်းကြီးသည် သာကူးတို့၏ အသင်းဖြစ်သည်။ (မှန်/ မှား)
(ဥပမာ- မန္တလေးတိုင်း ကြံ့ဖွံ့ခေါင်းဆောင် ရမ်စိန်မြင့်သည် တစ်ချိန်က (အခါအခွင့်သာစဉ်က) ဒေါ်စု၏ NLD-မန္တလေးမှ တက်ကြွသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခြေအနေတွင် ငရမန်စိန်မြင့်သည် ကြံ့ဖွံ့အမာခံဖြစ်၍ နေပေပြီး ဒေါ်စုနှင့် ငရန်မန်စိန်မြင့်တို့ ပဒုမ္မာခန်းမတွင် တွဲရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံ ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် ရှိသည်။)
၅။ စွမ်း/အားအဖွဲ့သို့ ခေါင်းမရှိသော လူလေလူလွင့်များသာ ၀င်သည်။ (မှန်/ မှား)
(ဥပမာ- စွမ်းအားရှင်များ စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပုံမှာ ရပ်ကွက်တွင်း ကျူးကျော်တဲများ၌ နေထိုင်သူများကို စွမ်းအားတွင်း မ၀င်လျှင် မနေရဟု ရယက အမိန့်ဖြင့် ၀င်ရောက်စေသည်။ ကြာရိုးကိုကြည့်၍ ရေ၏ အတိမ်အနက်ကို သိနိုင်သည် မဟုတ်တုံလော။)
၆။ နအဖ ခေတ်၌ ပညာမဲ့များနှင့် ဘိန်းမှောင်ခိုများ အရာရောက်သည်။ (မှန်/ မှား)
(ဥပမာ- အေးရှားဝါးလ် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် လောစစ်ဟန် ရှု။)
၇။ နအဖသည် သားသတ်သမားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ (မှန်/ မှား)
(ဥပမာ- မြို့ရော/တောပါမကျန် သားသတ်လိုင်စင်ကို နိုင်ငံတော်မှ နှစ်စဉ် ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် တရားဝင် တင်ဒါချပေးနေသည်။)
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://bigbbrown.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[ညီလင်းသစ်]3New Entries: သားကလေး, Johanna နှင့် ...
[MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA]2New Entri...
[ညိမ်းညို]2New Entries: နံနက်ခင်းသို့ ဖြူရှင်းလင...
[NYI LYNN SECK 18+ DEN] 8 New Entries: ခရီးသွားမည်...
[စပ်မိစပ်ရာ]4New Entries: Pencil Portrait
[ဆောင်း] 1 New Entry: With IMAGINARY Spaceship 3
[ဆုံဆည်းရာ] 19 New Entries: လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေ က...
[ဆိုးသွမ်း]6New Entries: Nine Words Women Use
[အတွေးရပ်ဝန်း]3New Entries: ချစ်ခြင်းဖွဲ့ အလင်္ကာ
[စိတ်မီးအိမ်] 1 New Entry: ကြေးကြီးစားကျွန်
[စိုင်းခမ်းထွန်း] 10 New Entries: how long will E-...
[မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတ္တများ]2New Entries: 7.2 Mbp...
[J] 1 New Entry: Fashion - မျက်တောင်ရှည်ဆေး
[ရင် ခုန် သံ] 1 New Entry: ဟိ ဟိ ရီဝူးနော် ဘရားသား...
[ခင်မင်းဇော်]2New Entries: အိမ်ခြေယာမဲ့ဝေဒနာ
[နံနက်ခင်းကဗျာ]2New Entries: လှူဒါန်းနိုင်ကြရန် ...
[ချင်းမလေး] 1 New Entry: ကျေးဇူြး့ပုပြီး
[KyiMayKaung]6New Entries: Following Lincoln's e...
[ကောင်းကင်ကို]2New Entries: မိဘမကောင်း သားသမီးခေ...
[Better Tomorrow] 1 New Entry: " မမေ့နိုင်သေးတဲ့ေ...
[ကြုံဆုံမိသမျှ] 1 New Entry: Fwd: Hello
[K]2New Entries: ခံစားမိသော ကဗျာ တချို့
[ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်]2New Entries: အချစ်စိတ်..
[ကပ်ပါပေ့ ပီကေရယ်]5New Entries: စီးပွားရေး ဖွံြ့...
[Yan Aung] 1 New Entry: မျဉ်းကွေးတစ်ကြောင်း၏ ဒိုင်...